Aggaammiin karaa adda addaa saba keenya Oromoo irratti adeemaa jiru dhaabbatuu qaba! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAggaammiin karaa adda addaa saba keenya Oromoo irratti adeemaa jiru dhaabbatuu qaba!
Caamsaa 2, 2019
Nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo akeeka saba bal’aa Oromoo galmaan gahuuf karaa nagaa walqixxummaa fi Dimokiraasii dagaagsuuf wayiita dhaaba keenya ABO dhaan hogganamnee warraaqsa gochaa jirrutti aggaammiiwwan jaarraa kana keessatti hinbarbaachifne karaa mootummaa fi addatti ammoo kashalabboota Amaaraa keessatti dhalataniin Oromoo irratti utuu aggamamaa jiruu agarra.
Hiriira guyyaa har’aa Caamsaa 2,2019 naannoo Amaaraa bakkoota garaagaraa keessatti adeemsifameen dhaadannooleen saba keenya Oromoo xiqqeessuu, arrabsuu fi jechoota fokkatoo daftaroonni seenaa fokkisaa barreessaa turan sanatti dhimma bahanii barjaa (Taampheellaa) irratti jechootni Oromoo arrabsan qabatamanii utuu bahamanii agarree jirra. Gochaan akkanaa nu Qeerroo Bilisummaa Oromoo tti yaaddoo guddaa naqee jira. Keessattu akeekni akkanaa nagaa saboota lamaanii booreessuun gaaga’ama lubbii fi kasaaraa garaagaraaf saaxiluu mala yaaddoo jedhu nutti hore.
Qaamotni gocha farra akkanaa qabatanii saba tokko balaaleffachuuf hiriira qindeessan yeroodhaan tohannoo seeraa argachuu baannan daandiin jeequmsaa babal’ataa adeemuuf karaa bana. Waan ta’eef dhugumatti Dimokiraasii fi Walqixxummaatti qaamni amanu gocha farra saba tokko balaaleffatu qabatee daandiitti walgurmeessee nii baha jennee hinyaadnu. Yeroo gara yerootti kanneen Amaara keessaa dhalatan saba keenya Oromoo arrabsuu, xiqqeessuu, kineessuu fi xureessuu irratti irra deddeebiin aggaamamaa turee ammallee itti fufee adeemaa jira. Kun ammoo obsa nu fixachiisuurraa qaama saba keenya Oromoo arrabsu ofirraa dinninuuf sochii gama kamiinuu cimsinee akka itti fufnu nu dirqaa jira. Nuti akeeka aanjaa’aa saba kamiifuu kunuunsaaf nagaa isaa eegaa qabsoo keenya waggoottan dheeraaf taasisaa turree ittis jirra. Akeekni qabsoo keenyaa ifaaf bilisa kan ta’e Dimokiraasii gabbisuudhaan walqixxummaa sabootaa dhugoomsuu akka ta’e taateewwan nuti hiriira karaa nagaa irratti agarsiisaa turre ragaadha. Kanaafuu qaamni akka sabaatti nu Oromoo abaaraa oole daddaffiin seeratti dhiyaatee mootummaan akka nu beeksisuu qabu nii gaafanna.
Gama biraan mootummaan biyya bulchaa jiru gootota aarsaa qaalii nuu kaffalanii darban akka hinyaadanne danqaa uumuudhaan guyyaa har’aa Guyyaa Gootota Wareegamtoota Oromoo Aanooletti kabajuuf qophoofne hanbisee jira. Yeroo nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo nagaa hawwaa, nagaa dheebotaa fi barbaadaa jirrutti nagaa biyya keenya Oromiyaa Booreessuudhaaf aggaammii fudhatamaa jiru ta’uu nu hubachiise. Sochii karaa nagaa akka nuti qabsoo keenya taliignee fiixa hinbaafne nu danquu keessatti qaamni mootummaa irra deddeebiin karaa ifaa fi dhoksaan akka nagaan qabsoo hingoone nu uggaraa jira. Kunis yaaddoo nageenya Oromiyaa nutti naquudhaan akeekni akkanaa garamitti adeema jennee akka yaaddoofnuuf daandii banaa jira. Gochaa fokkisaa akkanaa mootummaan irra deddeebiin nurratti raawwatu kana akka dhaabus gaafanna.
Kanumaan kan wal qabatu qabsaa’ota Oromoo hidhuu, adamsanii dhoksaan ajjeesuu fi doorsisuun bara kana ittuu caalee jira. Akeekni kun wayiita qabsaa’ota Oromoo irratti raawwataa jirutti Muummichi Ministeeraa biyyattii Dr. Abiyyi Ahemad kanneen daldala seeraan alaa baala sammuu namaa hadoochu daldaluurratti argaman biyyoota alaatti tohannaa seera jala jiran mana hidhaatii lakkisiisaa jira. Kunis biyyattiin biyya daldala seeraan alaa keessummeessitu fakkeessee jira. Qabsaa’ota Oromoo kanneen akka Jaal Gammachuu Ayyaanaa fi kumoota hedduun hidhaan dararaa yakkamtoota biyyoota alaatti harkaaf harkatti qabamanii mana seeraa galan hidhaarraa hiikuun biyyattii gara kamitti oofaa jira yaaddoo jedhu keessa nu galcheera.
Karaa biraa ammoo biyya keenya Oromiyaa keessatti saba keenya Oromoo beelaaf saaxiluudhaaf hojiin karaa dhoksaa mootummaadhaan hojjetamaa jiru akka dhaabbatu gaafanna. Keessattuu Qote bultootaa Oromoo qaala’iinsa jireenyaaf saaxiluudhaaf hojii guddaan hojjetamaa akka jiru Nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo cimsinee hubanna. Aggaammii beelaaf uummata keenya saaxiluuf aggamamaa jiru dura of kenniinsaan kan dhaabbannee balaaleffannu ta’uu hubachiisaa; mootummaan gocha farra karaa dhoksaaf ifaan uummata keenya irratti raawwatu akka dhaabu gaafanna. Xaa’oo Qote bultootaa duraa gatiisaa dabaluu cinatti “Xaa’oon hinjiru, sanyiin Boqoolloo hinjiru” jechuudhaan bakkoota hedduutti Qote bultootaa keenya yaaddoo jireenyaa keessa galchaa jira. Kun daddaffiin dhaabbachuu akka qabu nii gaafanna!
Walumaa galatti aggaammiin karaa addaa addaa saba keenya Oromoo irratti adeemsifamaa jiru dhaabbatuu akka qabu kabajaan gaafanna. Kanarra darbuudhaan irra deddeebiin uummata keenya Oromoo balleessuuf aggaammiin karaa addaa addaa itti kan fufu taanaan gama dandeenyuun uummata keenyarraa qolachuuf duubatti kan hinjenne ta’uu nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo diinaafis firaafiis dhaamsa dabarfanna!
Warii nama bittuu fi sammuu barannii Bilisumma fi walqixxuumma hin barbadanni. Jeeqaan heera biyyaa ammaa jiruu digguu fi halkanniif guyyaa doolottaa jiru. Kannaa beekuun garriin Bilisumma barbadduu hunduu wal gargarrun hummnootaa fsrraa bilisumma taan kana uffii irra dhowuun diriqidhaa.
Bilisumma fi demokraasiin haa Pakistan.